कसरी आउँछ अख्तियारलाई त्यो १० लाख ? – YesKathmandu.com
कसरी आउँछ अख्तियारलाई त्यो १० लाख ?
काठमाडौं । एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्री गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक ब्यक्तिलाई १० लाख दियो । प्रश्नपत्र गिरोहसँग खरिद गर्न अख्तियारले दिएको १० लाख अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रश्नपत्र बिच्ने गिरोहका विरुद्ध बलियो प्रमाण जुटाउन अख्तियारले १० लाख खर्चेको थियो । अख्तियारले दिएको १० लाख रकमबाट रातोपुल स्थिति गोल्डेन गेट कलेजका सञ्चालक, डा. प्रभात कुमार कुशवाहबाट प्रश्नपत्र खरिद गरिएको थियो । उक्त रकम कुसवहाले तत्कालै सीता खनाललाई दिएका थिए ।
खनालले लिएको रकम घुस नभई कुसवाहबाट लिनु पर्ने रकम रहेछ । पहिले कुसवहाले खनालबाट ऋणस्वरुप १० लाख रकम लिएका रहेछन् । त्यही रकम उनले खनाललाई बुझाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
२० मंसिरमा १० लाख रुपैयाँमा प्रश्नपत्र बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारको टोलीले सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । परीक्षा चलिरहेका बेला रातोपुलबाट गोल्डेन गेट कलेजका तीन सञ्चालक, कुशवाहलगायत अन्य सातजना पक्राउ परेका थिए ।
सातजनालाई पक्राउ गर्न र घटनाको पर्दाफास गर्न अख्तियारले नगद १० लाख रुपैयाँ एड्भान्स स्वरुप बुझाएको थियो । तर, आजसम्म पनि अख्तियार आफैँले बुझाएको रकम निकाल्न सकेको छैन ।
प्रश्नपत्र खरिद–बिक्री हुने गरेको सूचना पाएपछि अख्तियारको टोली विद्यार्थी बनेर डा. कुशवाहको सम्पर्कमा पुगेको थियो । कुशवाहले अग्रिम १० लाख रुपैयाँ मागेका थिए । १० लाख बुझेको भोलिपल्ट कुशवाहले रातोपुलनेर भेटेर प्रश्नपत्र दिने बताए । भोलिपल्ट परीक्षा सुरु भइसकेपछि मात्र प्रश्नपत्र दिइयो । प्रश्नपत्र लिएपछि अख्तियारको टोलीले त्यहीँबाट गोल्डेनगेट कलेजका सञ्चालक देवीराम पाण्डे तथा अध्यापक खेचर सापकोटालाई पक्राउ ग¥यो । प्रश्नपत्र लिन गएका उनीहरुले हतकडी लिएर गएका थिए । अख्तियारले त्यहाँबाट सातजनालाई पक्राउ ग¥यो । टोलीले अग्रिम बुझाएको १० लाख रुपैयाँ कुशवाहले आफूले पैसा तिर्नुपर्ने सीता खनाललाई दिइसकेका रहेछन् । अख्तियारले सीतासँग पैसा फिर्ता दिन आग्रह ग¥यो । तर, सीताले कुशवाहले आफूलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको जनाउँदै पैसा फिर्ता दिन अस्वीकार गरेकी छिन् ।
दीपिकाले क्याट्रिनालाई भनिन्, रणवीरसँग विवाह नगर्नू
बन्दकर्ताले हिन्दीभाषामा नारा लगाए
विश्व खाद्यय कार्यक्रम र रेडक्रसको चामलमा मुसाको लिड, चामल नखान आयोगको आग्रह
फेरी बढ्यो लोडसेडिङ, अब साताको ९३ घण्टा बिद्युत देख्न नपाइने
श्रीमानले नै यौनधन्दा गर्न बाध्य पारेपछि
डा केसीको समर्थनमा प्रदर्शन हने, प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा र उनले गरेका कामको छानविन गर्न माग
कमलपोखरीमा खुमबहादुर खड्काले गर्ने भए यस्तो शंखघोष
एमालेमा जन्मिए अर्काे लालबाबु,जस्ले पिएसओ समेत लिएनन